Shina: Adiny iray taorian’izay, nisy naka izy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Janoary 2019 15:45 GMT
Fisamborana bilaogera iray hafa, kisendrasendra fotsiny tamin'ity indray mitoraka ity no nahitanay izany. Andro vitsivitsy taorian'ny famaranana ny WordCamp China 2008, tao Beijing i Wen Yunchao, ilay olon-tsotra mpitati-baovao sady toniandahatsoratry ny tranonkala iray ary namoaka ny lahatsoratra hoe ‘Adiny iray taorian'izay, nisy naka izy‘:
Nomeko azy ny laharan'ny findain'i Liu Xiaoyuan satria noheveriko fa mila izany izy.
Adiny iray taorian'izay dia nalaina izy. Notanana tao amin'ny “foiben'ny polisy tao Fuyou St., eo ampitan'ny #18 Xirongxian Hutong“. Nandefa hafatra SMS tamiko izy nilaza hoe: “Nodarohana sy naratra ny iray tamin'ireo havantsika ary nodarohana ihany koa aho”, ary “nodorany ny sasany tamin'ireo taratasy (momba anay).”
Mitantana bilaogy fanta-daza natokana hanampiana ny ray aman-dreny hahita ireo zanany nalaina an-keriny sy namidy i Peng Wenle.